Millateriga ayaa jaray: waa maxay noocyada jira? | Ragga Stylish
Milatariga ayaa jaray
Mileteriga la jaray (kan timaha, oo aan lagu qaldin midka dharka) waa mid ka mid ah xulashooyinka ay tahay inaad tixgeliso haddii aad rabto inaad timo gaaban gaarto.
Sida waxyaabo kale oo badan oo qayb ka noqday nolol maalmeedkeena, asalkeedu waa ciidanka. Laakiin waqti hore waxay joojisay inay timo gaar ah u noqoto askarta. Maanta waxay si qoto dheer ugu dhex martay dadka rayidka ah sidoo kale.
2 Noocyada maxkamadda militariga
2.1 Gaaban dhinacyada oo dheer dusha sare
Joogitaanka milatari wuxuu xoojinayaa sifooyinka wajigagaar ahaan markay timaado kala duwanaanshaha gaagaaban. Tani waxay faa'iido u leedahay ragga leh daanka adag gaar ahaan iyo qof kasta oo doonaya inuu ka sii daayo ragannimo weyn, xoog iyo adkeyn guud ahaan.
Haddii xirfaddaadu qiimeyso mashruuc muuqaal dhalaalaya, sharad ku sameynta timo fiiqan (sida ay tahay kiisaska jarista militariga) ayaa kaa caawin doonta inaad u dhaqaaqdo jihadaas. Dharka rasmiga ah iyo xiirashada dhow waa furayaasha kale, in kasta oo gadhku sidoo kale shaqeyn karo haddii la siiyo daryeelka lagama maarmaanka ah.
Qaabkaagu ma aha wax aad u badan oo ku habboon, laakiin miyuu ka badan yahay hipster ama casriga? Ha walwelin: waa inaad fiirisaa wadada si aad taas u aragto jarista militariga waxay sameyn kartaa tandem heer sare ah oo leh gadhka, shaatiga, daloolinta iyo dhammaan noocyada dharka caadiga ah.
Noocyada maxkamadda militariga
Dadka badankood waxay ku xiraan timahan sawir gaar ah (badanaa aad u gaaban dhinacyada iyo nabarka qoorta oo leh qayb yar oo timo ah oo wax yar ka sarreeya korka), laakiin ma jiro hal nooc oo milatari ah oo la gooyey. Waxaa jira dhowr nooc, waxayna kala yihiin sidan soo socota:
Gaaban dhinacyada oo dheer dusha sare
Qaabkeeda gaarka ah ayaa isla markiiba lagu aqoonsaday adduunka militariga. Nape-ka iyo dhinacyada ayaa aad loo gaabiyey, badanaa eber. Dusha sare ayaa wax yar ka dheer. Si ka duwan timaha kale ee la midka ah, halkan qadka kala qeybinta labada aag waa inuu noqdaa mid aad u sarreeya. Ama waxa la mid ah, waa inaad kaliya ka tagtaa qayb yar oo timo ah adiga oo aan korka xiirin.
Haddii aadan rabin inaad timahaaga ka dhigto mid gaagaaban, tixgeli fadeexad caadi ah, halkaas oo maqas xirfad leh oo uu jarjaray tima-jarahaagu uu ka dhigayo aagagga kala duwan ee la gooyey inay si dhib yar u muuqdaan iyaga oo aan lumin qasabadda. Waxaad qaab ugu sareyn kartaa qaabab dhowr ah. Kiiskan, Chris Hemsworth wuxuu cayaaraa jahwareer la baray oo keena taabasho fudud iyo shaqeyn.
Timaha oo dhan waa la gaabiyey oo isla dherer baa la wada. Koobiyaha ayaa eber laga dhigi karaa ama shanlo ka sareysa ayaa la isticmaali karaa. Xulashada koowaad waa fikrad aad u fiican ragga timaha ka dhacaya.
Kahor intaadan sameynin isbadal, waa caadi inaad isweydiiso hadii ay sifiican ula socon doonaan timaha wajigaaga. Guud ahaan, ma jiro wax timo jar ah oo ku qaldan garka. Waxaa jira kaliya saameyn kala duwan. Kiiskan, hadaad isku darsato gadhka waxay abuureysaa farqi aad u weyn oo u dhexeeya madaxa iyo wejiga, taas oo kordheysa markii timaha dhererkoodu yaraado kan gadhkuna sii kordho. Tani khalad ma ahan, laakiin waa arrin doorbid shaqsiyeed. Haddii aad u muuqato mid fadli badan, horay u soco.
Nape-ka iyo dhinacyadu aad bay u gaaban yihiin, labada qayboodba waa isku mid. Dusha sare waxaa looga tagay dherer dhexdhexaad ah ama dhaadheer, taas oo ah sababta ay u tahay kala duwanaanshaha ay tahay inaad tixgeliso haddii aad rabto inaad sameysid taabasho ama faras.
Waa timo jar aad loo jecel yahay maanta, oo ah wax filimo iyo silsilado wax badan ku soo kordhiyeen. Brad Pitt wuxuu xirtay hoosta khafiifka ah ee cilladda dagaalka 'Cadho', in kastoo safiiradiisa ugufiican waa Peaky Blinders, iyadoo uu hogaminayo Thomas Shelby (Cillian Murphy).
Timahaaga sida aad u maareyn karto, sida ugu wanaagsan ee hoos-u-dhigista ayaa kuu shaqeyn doonta.. Waad dib u wada tuuri kartaa, siin kartaa mug ama qaab u siin kartaa taabasho shaqsiyeed, sida ay tahay kiiska jilaaga 'Peaky Blinders', oo ku daraya jajab adag. Samee koox weyn oo leh gadhka.
Xariiqda dhinaca waxay la xiriirtaa saraakiisha darajooyinka sare leh. Waa timo jar in badanaa lagu arkaa rooggado cas sababta oo ah qaab-dhismeedka ay ka hadlayso. Jilayaasha sida Ryan Gosling ama Leonardo DiCaprio waa taageereyaasha garaacista dhinaca munaasabadaha halka dharka labiska uu yahay Black Tie.
Waxaa jira dherer kala duwan. Waxaa lagu qaadi karaa maqas iyo timo jarayayaal labadaba. Qeybinta Ryan Gosling wuxuu ka tirsan yahay fasalka koowaad, kaas oo timaha oo dhan lagu jaray maqas isla dherer ah. Kadibna waxaa jira jaangooyooyin leh jareyaal, taas oo ka gaaban waa ikhtiyaarka aad u baahan tahay inaad tixgeliso haddii aad rabto qaybtaada dhinacaaga inay ka soo baxdo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Timaha » Milatariga ayaa jaray
Xiiso leh waxa loola jeedaa Madaxa Xiiray oo loo jarjaray dhammaanteen kuwa qaadanaya «cocobolos»; ilaa iyo inta qaabka madaxa uu ku habboon yahay. Qaabkani wuxuu kaloo bixiyaa sawirka cayaaraha, nadaafadda iyo nadaafadda, sidaa darteed, dharku waa inuu noqdaa qaab isku mid ah: dhaqdhaaq, nadiif ah oo miyir qaba labada munaasabadood ee rasmiga iyo kuwa aan rasmiga ahaynba.